16th April 2019 - Samasta Khabar
16th April 2019 16th April 2019 avigo
After the site of its discovery on the country’s largest island Luzon, it’s known as Homo luzonensis. A mixture of those found in very ancient human ancestors and in more recent people are its physical features. That could mean primitive human relatives left Africa and made it all the way to South-East Asia, something not previously thought possible. The discovery shows that human evolution in the region may have beenahighly complicated affair, with three or more human species in the regionn at around the time our ancestors arrive.…
सन्दीपलाई जिताउने होइन त इमर्जिङ्ग प्लेअर अवार्ड ? यसरी भोट गरौ ?
हाल दिल्ली क्यापिटल्सबाट इन्डियन प्रिमिएर लिग क्रिकेट खेलिरहेका नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आइपीएलको इमर्जिङ प्लेयर अवार्डको मनोनयनमा परेका छन् । इमरर्जिङ प्लेयर अवार्डको मनोनयनमा सन्दीपसँगै मुम्बई इन्डियन्सका राहुल चहर,रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरका मोहम्मद सिराज, राजस्थान रोयल्सका जोफ्रा आर्चर र श्रेयस गोपाल छन् । आइपीएलको २०१९ को सिजनमा दिल्लीबाट ४ खेल खेल्दै ५ विकेट लिएका छन् । पाँच खेलाडीको मनोनयन सार्बजनिकसँगै अवार्डको लागि भोटिङ खुल्ला भएको छ । आईपीएलको आधिकारीक वेवसाईटमा गएर भोट गर्न सकिन्छ । गत सिजनको अवार्ड दिल्लीका रिसब पन्तले पाएका थिए । सन्दीप गतसिजनबाट आइपीएलमा आबद्ध भएका…
आज ३ बैशाख, २०७६ – मंगलवारको राशिफल ! हेर्नुहाेस् आफ्नाे भाग्य ।
मेष झुटा आरोप आईपर्दा समस्या खेप्नुपर्नेछ । अनावश्यक धन खर्च हुँदा मानसिक चिन्ता वढ्नेछ । ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ । वृष नयाँ कामको थालनी गर्ने समय छ । परिश्रम गरेमा धनआर्जन हुने देखिन्छ । मित्रसम्बन्ध प्रगाढ हुने देखिन्छ । अध्ययनमा प्रगति हुनेछ । मिथुन आकस्मिक धन लाभ हुनेछ । काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ । महिला वा मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । कर्कट नराम्रो समय छ, चोटपटक लाग्न सक्छ । आर्थिक समस्याले सताउनेछ । द्धिविधा उत्पन्न हुनेछ । सिंह मान्यजनको साथ पाइनेछ । मनमा शान्ति छाउनेछ ।…